Extensions, Components, Modules & Plugins ho an'i Joomla! - Solosaina Joomla
Joomla-Solutions.com Extensions ho an'ny CMS Joomla!
Ny fahaizako Joomla
Joomla na WordPress?
Mamorona tranonkala miaraka amin'i Joomla
Firy ny fanitarana azoko apetraka amin'ny Joomla?
Inona ny fanitarana hisafidy hananganana tranokala Joomla?
Ahoana ny fametrahana fanitarana na module ao amin'ny Joomla?
Ovay ny modely Joomla
Ahoana ny fananganana tranonkala miaraka amin'i Joomla?
Fanomezana fanomezana Paypal
Lahatsoratra - Rakitra
Lahatsoratra - Famandrihana
Lahatsoratra - Sary
Lahatsoratra - Fampandrenesana mailaka
Lahatsoratra - tranga
Lahatsoratra - hetsika naloa
Ianao dia eto:
Ireo singa, modules ary plugins ho an'ny Joomla CMS!
JoomlAddComments na aiza na aiza
Ity fonosana ity ho an'i Joomla, anisan'izany ny singa sy ny maody, dia hahafahanao manampy faritra maneho hevitra amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao.
Ity plugin ity dia ahafahanao mitantana ny fifandraisan'ny kaonty mpampiasa Joomla.
Ity modely ity dia mampiseho varavarankely popup miantso ny mpampiasa hanamarina ny taonany alohan'ny hidirana ny pejy.
Io dia ahafahanao manamarina ny taonan'ny mpampiasa alohan'ny hidiranao amin'ny pejy natokana ho an'ny olon-dehibe, ohatra.
Ity plugin ity dia ahafahan'ny mpampiasa mampiditra horonantsary Dailymotion ao amin'ny mombamomba azy ireo.
Ity plugin ity ho an'i Joomla dia ahafahan'ny mpampiasa mametraka horonantsary Youtube ao amin'ny mombamomba azy.
Ity plugin ity dia ahafahanao mampifandray ny lisitry ny sary amin'ny lahatsoratra Joomla ary asehoy eto ambany.
Ity plugin ity dia ahafahan'ny mpampiasa mampiditra horonantsary TikTok ao amin'ny mombamomba azy ireo.
Ity plugin Joomla ity dia ahafahanao mandefa lahatsoratra na ny fampidirany amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny vondrona mpampiasa na adiresy mailaka.
Ity plugin ity dia ahafahanao manampy sary mombamomba ny kaonty mpampiasa Joomla. Fametrahana sy fikirakirana haingana sy mora.
Ity fonosana plugins 2 ity dia ahafahanao mitantana hetsika avy amin'ny lahatsoratra Joomla.
Ity plugin ity dia mamela ny fampidirana bokotra "Donate" amin'ny mombamomba ny mpampiasa.
Ity plugin ity dia ahafahanao mampifandray ireo rakitra amin'ny lahatsoratra Joomla ary manolotra azy ireo maimaimpoana maimaim-poana na aloa amin'ny alàlan'ny plugin fanampiny Lahatsoratra - Famandrihana.
Ity plugin ity dia manampy fizarana Biography amin'ny mombamomba ny mpampiasa. Tena mora ampiasaina amin'ny fametrahana atiny feno zavatra ary mianatra bebe kokoa momba ilay olona.
Ity plugin Joomla ity dia ahafahanao mampiasa lahatsoratra ho takelaka vokatra. Tsy mila mametraka vahaolana e-varotra manelingelina sy mandany fotoana handaminana azy. Ity plugin ity dia manampy ny fividianana asa mivantana avy amin'ny fanovana lahatsoratra.
Ity plugin ity dia ahafahan'ny mpampiasa mampiditra horonantsary Vimeo ao amin'ny mombamomba azy ireo.
Afa-po na naverina averina
Raha nividy ny iray amin'ireo vokatrao izahay ary tsy mifanaraka aminao, dia miverina hamerenanao anao feno izahay.
Ny fanitarana ataonay dia Joomla 3.x mifanentana.
Apache 2.0 sy +
Nginx 1.0 sy +
PHP 5.3.10 sy +
MySql 5.1 sy +
SQL Server 10.50.1600.1 sy +
PostgreSQL 8.3.18 ary +
Ampiasao ho toy ny lambam-bokatra i Joomla!
Fampandrosoana an'i Joomla!
Extensions sy ny tolotra omeny
Ny fonosan'ny fiteny
Ny paty miloko marevaka!
Tsy misy fahantrana ...
Tsindrio eto raha te-hiditra amin'ny tranonkala demo
Plugins: Manampia saha avy amin'ny fiasa onContentPrepareForm
Fomba fanovana modely Joomla
Ataovy manokana ny tranokalanao Joomla miaraka amin'ny fanitarana tsotra sy maivana!
Jereo eo amin'ny pejy fandraisana ny tranokalako, na avy amin'ny menus, safidy maro karazana fampiasa tsotra sy maivana hanampiana ny tranonkalanao Joomla. Azonao atao ny mampiasa ny plugins, modules ary kojakoja entiko mampanan-karena ny tranonkalanao, bilaoginao na Ecommerce amin'ny alàlan'ny Joomla CMS.
Manolotra anao koa fampianarana sy fampianarana vitsivitsy momba ny fampiasana Joomla aho, toy ny fampiasana modely, ny fomba hanampiana lahatsoratra vaovao, ny fomba fananganana magazay, ny famoronana modules, ny hevitra ary maro hafa. Ho fantatrao bebe kokoa momba ny vaovao rehetra eo an-dàlana ary ho avy amin'ny alàlan'ny bilaogiko.
Anisan'ireo rafitra fitantanana votoaty malaza indrindra toa an'i Drupal, Wordpress, Joomla, Jimdo, Prestashop na koa Shopify, no nisafidianako an'i Joomla tamin'ny famoronana tranokala fampirantiako, bilaogy na fivarotana an-tserasera mihitsy aza. Miaraka amin'ireo tontolon'ny modely css mamaly mifanaraka amin'ny finday avo lenta sy ny takelaka, i Joomla no fitaovana mety indrindra hamoronana tranokala ankehitriny. Manana tetikasa ve ianao ary te hanomboka haingana? Tadiavo ny anaranao, fampiantranoana Internet misy fidirana ftp ao amin'ny mpisafidy tianao, avy eo, apetraho Joomla ary avelao hitarika anao amin'ny fanaingoana azy tsotra sy tsotra. Raha mpamorona toa ahy ianao dia afaka mandroso lavitra kokoa ary mampivelatra ny fanitarana anao manokana: sary mampiseho sary, galeri-sary, sary tsindry, Widget, rafitra fampandrenesana, fanomezana paypal, famandrihana famandrihana, manager, fametrahana rafitra fanamarihana, fitadiavana taona, tetiandro sy fitantanana hetsika, lahatahiry, fampidirana horonantsary, fitantanana dokam-barotra sns
Miaraka amin'i Joomla, haingana ny famoronana tranokala. Araraoty ny sehatry ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ireo mpamoaka lahatsoratra WYSIWYG mba hampanan-karena ny atiny, hanatsara ny referansa voajanahary, hiseho amin'ny motera fikarohana, hahazoana tsindry ary hanatsara ny varotrao.
Tsotra sy intuitif, i Joomla amiko no CMS tsara indrindra. Ny fananganana ny tranonkalanao dia tsy mora kokoa.
Clement, manampahaizana manokana amin'ny fananganana tranokala Joomla
Copyright © 2020 Joomla-Solutions.com - Fanitarana, singa, mody ary plugins ho an'i Joomla.
Joomla! ® anarana no ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana voafetra amin'ny Zava-misy misokatra any Etazonia sy firenena hafa.
Joomla-Solutions.com tsy mifandray amina na ankatoavin'ny Open Source Matters na ny Joomla! Project.
SEO, fanoratana tranonkala